Puebla de Sanabria को कुनामा र विरासत पत्ता लगाउनुहोस् यात्रा समाचार
Puebla de Sanabria मा के हेर्ने
Susana Garcia | | España, के हेर्ने
शान्त शहर Puebla de Sanabria Zamora को प्रान्तमा स्थित छ, Castilla y León मा। शताब्दीयौं अघि यसको स्थानले यो रणनीतिक एन्क्लेभ बनायो, पोर्तुगालको सिमानाको निकटताका कारण। यसैले यो एक सुदृढ र पर्खाल भएको शहर थियो। सन् १ 1994 XNUMX in मा ऐतिहासिक art कलात्मक पहिरनका लागि सांस्कृतिक चासोको सम्पत्ति घोषणा गरी यसलाई ठूलो राजनीतिक र धार्मिक महत्त्वको साथ सम्पन्न गरियो।
La पुएब्ला डे सान्ब्रिया भ्रमण गर्नुहोस् यो एक ऐतिहासिक र धेरै शान्त गाउँको भ्रमण हो, सुन्दर प्राकृतिक स्थानमा। यो आफ्नो उत्कृष्ट सम्पदाको लागि हो, साथै लगो डे सान्ब्रिया प्राकृतिक पार्कको नजिक पनि छ, जुन इबेरियन प्रायद्वीपको हिमनदी तालहरू मध्ये सब भन्दा ठूलो हो। हामी पुएब्ला डे सान्ब्रियामा देख्न सक्ने सबै कुराका बारे थप जानकारी जान्न लागेका छौं।
1 महल र बेन्वेन्टेको काउन्टहरूको प्यालेस
2 सैन कार्लोसको फोर्ट
3 सान कायाटोनोको हर्मेटेज
4 सान्ता मारिया डे एजोगुको चर्च
5 जियान्ट्स र बिगहेड्स हाउस संग्रहालय
6 कलात्मक ऐतिहासिक जटिल
7 सनाब्रिया ताल
महल र बेन्वेन्टेको काउन्टहरूको प्यालेस
यो शहर एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान थियो जब यो पोर्तुगल बिरूद्धको सिमाना बचाउनको लागि आयो, यसैले यो शताब्दियौंदेखि सुदृढ भएको थियो। को प्रसिद्ध महल र बेन्वेन्टेको काउन्टहरूको प्यालेस यो अझै शहरमा अवस्थित छ र यसलाई सुरक्षित राखिएको छ, यसको मुख्य पर्यटक आकर्षण मध्ये एक हो। यो महल १ the औं शताब्दीको हो र वर्तमानमा बिभिन्न ठाउँहरू छन्। यसको उत्तरी क्षेत्रमा यसको आगन्तुक केन्द्र र सनाब्रिया टुरिस्ट अफिस छ। थप रूपमा, यससँग 'रुटा डे लस पमेन्टेल' मा र यस शहरको वरपरको दृश्यको महत्त्वमा धेरै थिमेटिक कोठाहरू छन्।
उहाँको राख्नुहोस् 'किल्लाको केन्द्र' जसमा तपाईले महल र प्रान्तको अन्य दुर्गहरूको ईतिहासको बारेमा बढी सिक्न सक्नुहुन्छ। पूर्वी क्षेत्रमा कासा डे ला कुल्चुरा छ, जहाँ त्यहाँ पुस्तकालय, प्रदर्शनी हल र एउटा सम्मेलन हल छ।
सैन कार्लोसको फोर्ट
Puebla de Sanabria को शहरी क्षेत्र को दक्षिण मा यो किला को अवशेषहरु छन्, पुरानो शहर को सुदृढ क्षेत्र को अर्को शरणस्थान। को सत्रौं शताब्दी देखि मिति बाँकी छ र तिनीहरूको ऐतिहासिक मूल्य छ। जब यो दुर्ग हेर्नको लागि आउँदछ, यो ऐतिहासिक चासो भएका मानिसहरूलाई सिफारिस गरिन्छ। हालसालै यस क्षेत्रमा किल्लाको अवशेष पुनः प्राप्त गर्न स्वैच्छिक काम भइरहेको थियो।
सान कायाटोनोको हर्मेटेज
यो सानो सम्पत्ती सान्ता मारिया डे एजोगुको चर्चसँग जोडिएको छ, यद्यपि यो स्वतन्त्र भवन हो जुन बारोक शैलीमा १th औं शताब्दी। यसमा केही रोचक विवरणहरू र एक सुन्दर ढु stone्गाको गुम्बजका साथ भित्र एउटा सानो चैपल छ, यद्यपि उत्तम पक्कै गहनाको साथ यसको बारोक अनुहारमा छ।
सान्ता मारिया डे एजोगुको चर्च
यो चर्च हर्मिटेजमा जोडिएको छ र पुएब्ला डे सान्ब्रियाको सब भन्दा पुरानो भवनमध्ये एक हो, किनकि यो थियो १२ औं शताब्दीमा रोमान्स्क शैलीमा निर्माण गरिएकोयद्यपि पछि यसले केहि सुधारहरू गर्यो। यो महलको नजिकै प्लाजा मेयरमा अवस्थित छ। ढोकामा तपाईले रोमनस्केक क्यापिटलहरू आदम र हव्वा जस्ता विषयवस्तुहरूसँग देख्न सक्नुहुन्छ। भित्र, १th औं शताब्दीको बप्तिस्मा फन्ट बाहिर देखिन्छ। एउटा जिज्ञासु तथ्यको रूपमा यो पनि याद गर्नुपर्दछ कि १ 1995 XNUMX in मा यस जग्गामा चिहानको ढु light्गाको एक सेट प्रकाशमा ल्याएर भूमिमा सुधार गरियो।
जियान्ट्स र बिगहेड्स हाउस संग्रहालय
यो शहरमा रमाईलो यात्रा हो। यो विशिष्ट संग्रहालय ऐतिहासिक भवनहरू मध्ये एकमा अवस्थित छ। यो भित्र घर छ ठूला टाउको र ठेठ दिग्गजहरूको सेट पहिले नै शहरको सम्पदाको हिस्सा भएका उत्सवहरूको। यी मध्ये केही तथ्या .्क १ th औं शताब्दीका हुन्। निस्सन्देह यो एक परम्परालाई समर्पित संग्रहालय हो जुन यस समुदायको र अन्य केहि चाडपर्वहरूमा देख्न सकिन्छ।
कलात्मक ऐतिहासिक जटिल
यदि त्यहाँ केहि छ जुन यो जनसंख्या मा गर्न सकिन्छ यो छ यसको ऐतिहासिक जटिल आनन्द लिनुहोस्। ठेठ घरहरू राम्रोसँग संरक्षित ढु stone्गा facades र एक वातावरण जुन अर्को युगमा देखिन्छ जस्तो लाग्न सक्ने कुरा भनेको आगन्तुकहरूको लागि ठूलो मूल्यवान् छ। कुनै श doubt्का बिना, Puebla de Sanabria एक सहर हो जसले शान्त वातावरण प्रदान गर्दछ जहाँबाट रमाइलो गर्न सकिन्छ।
Puebla de Sanabria को शहर नजिक छ प्रसिद्ध Sanabria ताल, हिमनद उत्पत्ति को एक ताल जुन इबेरियन प्रायद्वीपमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण छ। यो ताल लेगो डे सनाब्रिया प्राकृतिक पार्क र सेगुन्डोडेरा र पोर्टो हिमालहरूको रूपमा चिनिने एक चीज हो। यो ताल एक सुन्दर प्राकृतिक वातावरणमा अवस्थित छ, पैदल यात्राको दिनको मजा लिन आदर्श छ। थप रूपमा, तालमा नै तपाईं केही पानी खेलहरू गर्न सक्नुहुनेछ, किनकि यसमा स्केटबोर्ड र क्यानो भाडा छ। यो परिवार संग रमाईलो दिन बिताउन को एक मुख्य स्थान हो। तपाईं Puebla de Sanabria मा रुचि ठाउँहरू के सोच्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » España » Puebla de Sanabria मा के हेर्ने
नर्वेलीयन फजर्डहरू के हुन्?
मृत सागरमा पर्यटन